टिके डन इन्काउन्टर प्रकरण : झुटो सन्देशले प्रहरीमा लफडा, को हुन् टिके ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १५, २०७४ समय: ८:५३:१४
काठमाडौं, १५ माघ । शनिबार साँझ एकाएक एउटा सूचना भाइरल बन्यो, डकैत घटनाका नाइके ‘टिके’ भन्ने टीकाबहादुर मगर प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए।अनुसन्धान गर्ने निकाय महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाटै उक्त सूचना बाहिरिएको थियो। महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीले अधिकांश सञ्चारमाध्यममा ‘प्रहरीको गोलीले टिके ढल्यो’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए तर उनको उक्त प्रतिक्रिया आधा घन्टा पनि टिकेन। फेरि महाशाखाले भन्यो, ‘टिके जिउँदै छ, मरेको छैन। उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो।’
जिम्मेवार निकायबाट फैलिएको भ्रामक सूचनाले अहिले प्रहरीमा लफडा सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्दले ‘टिके कहिले मर्‍यो भन्ने, कहिले घाइते भन्ने ? यस्तो सूचना कसरी लिक भयो ? ’ भन्दै लोहनीसँग प्रस्टीकरण मागेका छन्। लोहनीले भने गलत सन्देश सुनाएको भन्दै चितवन रामनगरमा टिकेको खोजीमा जुटेको प्रहरी टोलीलाई झपारेको बताइएको छ।
हात र तिघ्रामा गोली लागेर अचेत बनेको टिके मर्‍यो भन्दै प्रहरी टोलीले लोहनीलाई सूचना दिएको थियो। त्यही सूचनालाई आधिकारिक मान्दै बाहिर ल्याएको लोहनीले बताएका छन्। ‘प्रारम्भिक सूचना जे आयो, त्यही रिले गरें तर पछि अस्पताल ल्याएपछि टिके बाँचेको खबर आयो,’ लोहनीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गलत सूचना सुनाउने प्रहरीमाथि सोधपुछ गर्दै छु।’ घाइते टिकेको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
डकैत घटनाका नाइके टिके मारिएको हल्ला फैलाएको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख दिवेश लोहनीसँग प्रस्टीकरण।
०६९ साउन ३ गते फेरि चोरी घटनामा पक्राउ पर्‍यो र धरौटीमा छुट्यो। लगत्तै सिक्री लुटपाटमा सक्रिय भयो। ०७१ माघ २१ मा नयाँ बानेश्वरमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सेवाग्राहीबाट १८ लाख ८४ हजार, सोही वर्ष कात्तिक २१ मा कपनमा र पुस ६ गते जोरपाटीमा नगद लुटपाट तथा ०७२ वैशाख २७ मा बाफलमा र जेठ २७ मा बुद्धनगरमा सिक्री लुटपाटमा उसको संलग्नता रहेको प्रहरी दाबी छ।
उसले ०७२ जेठ २० मा बानेश्वरबाट मोटरसाइकल र जेठ ३२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटको पार्किङबाट बोलेरो गाडी चोरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। पछिल्लोपटक चोरी घटनामा डिल्लीबजार सदरखोरमा जेलजीवन व्यतित गरिरहेको टिके काँडेतार काटेर भागेपछि प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा शनिबार दोहोरो फायर भएको महाशाखाको दाबी छ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।